ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 12/09/08
ဒီနေ့..ကျွန်တော့် (office) ကွန်ပျူတာက ပျောက်နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့.
Option tools ကိုပြန်ရတယ်ဗျာ… ဖြစ်ပုံကဒီလို.. တော်တော်လေး ကြာပြီ.. သိတဲအတိုင်း ရုံးကွန်ပျူတာ ဆိုတော့ personal ကိုထင်သာ မြင်သာ မထားရဲဘူး။ ကောင်မလေး (ဘယ်သူလဲလို့မေးနဲ့) ပုံတွေပါ တဲ့ personal ဆိုတဲ folder ကို hidden လုပ်ထားတာ.. အဲဒီအချိန် တုန်း က ကွန်ပျူတာ သုံးရတာ..အိုအေပဲ..ကြည့်ချင်တဲ့အခါ.. tool > folder option> view က show hidden file ဆိုတာ လေးကို နှိပ် လိုက်တယ်..ကြည့်လို့ရတယ်.. ဒီကြားထဲ..အလုပ်တွေကများတယ်.. မကြည့်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီ။ ဒုက္ခနဲ လှလှနဲတော့ တွေ့ပြီ။ menu bar > folder options တစ်ခုလုံးပျောက် သွားတယ်.. တကယ်ကို ဒုက္ခပါပဲ.. ဒီတိုင်းဆို ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ ကြည့် လို့မရတာကပြသနာ အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူ.. ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရပါမလဲပေါ့။ စဉ်းစားတယ်..ဒါနဲ့ ကိုမောင်လှ..ဘလော့မှာ ဖတ်ဖူးတယ်ထင်တယ်..ပြန်ရှာ ဖို့ အချိန်ကလည်း..မပေးခြင်ဘူ.. ကိုမောင်လှလား..ကိုညီလင်းဆက်လား ဘယ်သူ့ဘလော့လည်း သိပ်မသေချာဘူး ဒါနဲ့..MBS မှာ ကိုမောင်လှကြီးကို မေးရတယ်..သူ့ကျေးဇူးကြောင့်..ခုတော့..option too ပြန်ရလို့.. ပုံတွေလဲ ပြန်ရပြီ..ကျေးဇူးအထူတင်ကြောင်း လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး ပြောလိုက်ခြင်တယ် ဒီကြားထဲမှာ..မေးခွန်းတွေ English လိုမတောက်တခေါက် လေးနဲ မေးမြန်း ပြီး ဒုက္ခပေးမိတဲ့.. သူများ (ဘလော့ဂါ) ကိုလည်း နားလည်းမှုလွဲသော အဖြေများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
ကိုမောင်လှဆီက ဖြေကြားပေးတဲ..စာကို comment ကနေ ကူထားတယ်.
*** Folder Options ပျောက်သွားတဲ့ ကိုဆန်းဝင်းရေ... အဲဒါ virus ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... registry ကို manual ပြင်တတ်မယ် ဆိုရင်လည်း ပြင်လို့ရပါတယ်... မပြင်တတ်ရင်
ထဲက ဟာလေး download လုပ်ပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါ ခင်ဗျာ ***
သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာ -- အိုကေတယ်..
DatE Friday, September 12, 2008 LaveL ကျေးဇူးစကား0comments link this
မနက်စောစော မိုးလေးဖွဲဖွဲ ရွာနေတယ်..အလုပ်ကိုရပ်ပြီး မိုးခိုလို့ မရဘူး ။ ဒီမှာက မိုးကိုအစိုးမရဘူလေ။ အရမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး ဖွဲဖွဲ-ဖွဲဖွဲ နဲ့..ရွာနေ တာပဲ။ ရောက်စကတော့ ဒီမိုးကို ကြောက်တယ်။ ခုတော့ ကျင့်သားရသွားပြီ။မိုးရွာပြီးစ..မြင်ရတဲ မြင်ကွင်းကြောင့်..ဘလော့ကို သတိရမိသွားတယ်.. ခုတလော ဘယ်လိုမှန်းကိုမသိဘူး တစ်ခုခု ဆို ဘလော့ကိုပဲ ပြေးပြေး သတိရမိတယ်.. ဒါကြောင့် တင်ဖြစ်သွားတာ.. လက်က စာတွေရေးခြင်နေ တယ်။ အလုပ်က အချိန်တွေ အကုန်စားပစ်တယ်။ လူနဲစိတ်ကတော့ အတူ ရှိနေချိန် နည်းသလိုပဲ။
DatE Friday, September 12, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this